Fanalana andro Cellulose Kitchen, Compressed Cellulose Fanalana andro - Neko
Ningbo Neko spaonjy teknolojia mpiara., Ltd naorina tamin'ny 2012. Izany dia fanondranana-oriebred orinasa mpanamboatra anjara amin'ny famokarana ny matihanina sy ny seles ny cellulose sponjy sy ny sekely biriky.
Manarona ny orinasa trano faritra 25000M2 maherin'ny 100 mpiasa. Cellulose sponjy efa lasa tonga, CA65, FSC mari-pankasitrahana. Misy lehibe laboratoara, ny toetra sy ny fiarovana ny vokatra dia voafehy tanteraka.
Bebe kokoaNingbo Neko Fanalana Teknolojia Co., Ltd.
absorbency tsara ny rano sy mateza
nampiasaina ho an'ny Auto sy ny faritra achitectural
malefaka sy mateza
Fanalana andro Handy 70-0134-21
In pede km liquet
Naorina tamin'ny Aogositra 2001, Ningbo Neko tokantrano vokatra Co., Ltd. dia fanondranana-mpanamboatra manokana miompana amin'ny famokarana sy ny fivarotana ny vokatra sy ny fanadiovana ankohonany ilaina isan'andro. Presentthe orinasa amin'ny faritra manarona ny 16500m2 ...
Expandable Fanalana andro, Compressed Cellulose endrika Fanalana andro, Compressed Cellulose Cleaning Fanalana andro , Cellulose Compressed Fanalana andro, Oval Cellulose Kitchen Fanalana andro , Fanalana andro Compressed Cellulose,